Home Wararka Gudaha Maraakiibta kalluumaysiga Spain iyo Faransiiska ee la Xaqiijiyey inay si sharci darro
Maraakiibta kalluumaysiga Spain iyo Faransiiska ee la Xaqiijiyey inay si sharci darro
ah uga kalluumeystaan Somalia iyo Badwaynta Hindiya ayaa lagu daray liiska madow kaddib markii ay Hay’ada Blue Marine Kashiftay Boobka labadan wadan.
Guddiga ilaalinta Tuunnaha Badweynta Hindiya IOTC ayaa sheegay in maraakiibtan lagu helay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen aagga dhaqaalaha gaarka u ah dalalka Soomaaliya, Mauritius, Hindiya iyo Mozambique; iyagoo aan haysan ogolaanshaha dalalka ay Xeebahooda boobayeen.
Warbixin ay soo saaartay IOTC oo ah hay’ad qaabilsan ilaalinta kalluunka Tuunnaha ayaa lagu yiri
“ Maraakiibta Spain iyo france waxay burbur iyo xaalufin Kalluun gaar ah ku hayaan ​​baddeena Badwaynta Hindiya , waxayna khatar ku tahay nolosha badda iyo dadka ku tiirsan oo dhan.”
Maraakiibtan Faransiiska iyo Spain ayaa 97% waxay Jariifaan Kalluunka Tuunnada,waxayna sharci daro ku qaataan Kalluun ka badan inta ay Jilaabtaan wadan dal kasta oo ku yaalla Badwaynta Hindiya,oo ay ugu sii daran tahay Somalia . !!
Hay’ada IOTC ayaa sheegtay inay Tallaabo adag qaadeen oo ay dhammaan maraakiibta sidata calamada France iyo Spain la mamnuucay, oo aanay dib dambe loogu ogolaan doonin inay ka kalluumaystaan aagga Badweynta Hindiya .
Somalia oo leh xeebta ugu dheer Badwaynta Hindiya ayaan lahayn ciidan badeed iyo siyaasad qaran oo ilaalisa baddaasi, taasoo keenta inaan kaliya laga kalluumaysane sun halis ah lagu qubo.
Waxaase la yabaa leh Midowga Yurub oo sheegta inuu burcad badeed ka ilaaliyo Somalia uu hada doonayo in loo kordhiyo rukhsadda ay ciidamadoodu ku joogaan biyaha Somalia, iyagoo aan marna soo sheegin maraakiibtan tirada badan ee sharci darrada ah uga Kalluumaysta xeebaha dalka Somalia.
#NB Sababta IOTC ay u Mamnuucday Dhamaan maraakiibta sita calanka labadan Wadan wax yar maaha,waa Xaalad xadka dhaaftay Somaliya-na waaba ugu sii liidataa oo cid xil iska saartaa majirto in kasta ha le’e kaatee .
Previous articleTababarihii kooxda kubadda cagta oo shaqadii laga eryay.
Next articleBil ka dib markii dabaylo dufaanowato ay ku dhufteen dhul badan oo ka tirsan Sucuudiga
Khilaaf salka ku haya Al-Shabaab oo ka dhex qarxay culimada Somaliland
Gabood fallo ayaa loogeystay qalbiga ayeey ka gubanayaan balse kamma hadli...